YEYINTNGE(CANADA): Sunday, June 05
ဆန္ဒပြမယ်ဆိုလို့ မြို့တော်ခန်းမ ရှေ့မှာ လူတွေ စောင့်ကြည့်နေ
င်ငံရေးပါတီတချို့ ဆန္ဒပြမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ကြောင့် ရန်ကုန် မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ ဒီကနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက လူနှစ်ရာ ဝန်းကျင်လောက် စုရုံးခဲ့ပြီး ရဲနဲ့ လုံထိန်းတွေ၊ အရပ်ဝတ် လုံခြုံရေး ဝန်ထမ်းတွေ ရောက်ရှိလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရန်ကုန် မြို့တော်ခမ်းမ။ (wikipedia)
ဒီလို လူစုလူဝေး ဖြစ်နေချိန်မှာ အရပ်ဝတ် လုံခြုံရေးအရာရှိတဦးက အရင် စစ်အစိုးရ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ‘ငါးယောက်ထက် လူ ပိုမစုရ’ ဆိုတဲ့အမိန့်ကို သိသလားလို့ ခြိမ်းခြောက် မေးမြန်းတဲ့အတွက် စောင့်ကြည့်နေသူ တချို့နဲ့ စကား အချေအတင် ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
NLD အဖွဲ့ဝင်တဦး ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ခင်ဝင်းခိုင်က အခုလို ပြောပါတယ်။
“မြို့တော်ခန်းမမှာ လူနှစ်ရာကျော်လောက်၊ ဘုရားကျောင်းရှေ့မှာ ဒီဘက်က ပန်းခြံထောင့်မှာ လေးငါးဆယ်ယောက် အဲဒီလို လူတွေက စုနေတာ။ ဒီနေရာတွေက တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင် လူရှင်းတယ်။ အခုကျတော့ လူအများကြီး ရောက်နေတယ်။ လုံခြုံရေးတွေလည်း အများကြီးပဲ။ တအောင့်လောက်နေတော့ ရဲမှူးလား ဘာလားမသိဘူး သူက လာပြီးတော့ ဒီမှာ ဘာလာလုပ်တာလဲတဲ့။ ခင်ဗျားတို့ မာရှယ်လော မသိဘူးလား တဲ့။ ကျမတို့ဘက်က လူတွေကလည်း ပြန်ပြောတယ်၊ အရပ်သားအစိုးရ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီ ပုဒ်မတွေ မာရှယ်လောတွေ ရှိသေးလို့လား ဆိုတော့ သူတို့က ‘မဟုတ်ပါဘူး၊ မရှိပါဘူး’ တဲ့။ မရှိရင် ကျမတို့ကို လာမပြောနဲ့ဆိုပြီး ကျမတို့နဲ့ စကားများပြီး ကျမတို့လည်း တအောင့်လောက်နေတော့ ကိုယ့်လမ်းကိုယ် ပြန်လာကြတယ်”
နိုင်ငံရေးပါတီ တချို့က ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၂၆ ရက်နေ့စွဲနဲ့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရဆီမှာ ဆန္ဒပြခွင့် တင်ပြ တောင်းခံထားကြပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆန္ဒပြပွဲ ဖြစ်မဖြစ် အကဲခတ်ကြသူတွေ စုရုံး ရောက်ရှိနေကြတာလို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီ ဆန္ဒပြခွင့် တင်ပြချက်ကို အာဏာပိုင်တွေက ခွင့်မပြုဘဲ ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့က ငြင်းဆန်ထားပြီးပြီလို့လည်း သိရပါတယ်။
ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည်ိံငြ့်ိုံင်ငံရေး အကဵဉ်းသားမဵား လတြ်ေူမာက်ရေးအတကြ် အဂဿၝနေႛတိုင်း ဘုရားတငြ် ဝတ်ူပြ ဆုတောင်းနေုကသူမဵာူးဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)
ဆုတောင်းပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့သူတွေကတော့ ဒဂုံ-တောင်၊ ဒဂုံ-မြောက်၊ မရမ်းကုန်း၊ သံလျင်၊ မြောက်ဥက္ကလာ၊ တွံတေးမြို့နယ်တွေက ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူတို့အားလုံးဟာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေး လက်မှတ်ထိုးပြီး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဆီ ပေးပို့တဲ့ လှုပ်ရှားမှုမှာလည်း ပါဝင်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/05/20110အကြံပြုခြင်း
အညတရ သူရဲကောင်း ဂုဏ်ပြုပွဲသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှာစကား
၂၀၁၁-၆-၅ ရက်နေ့တိုကျိုမြို့Seiketsu Consumer Center (4F) တွင် အညတရသူရဲကောင်းဆုကို မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ မိမိ၏ကိုယ်ကျိုးကိုစွန့် ကာ တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုး အတွက် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့ အခွင့်အရေးရရှိရန် တိုက်ပွဲဝင်နေကြသော မထင်ရှားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား ချီမြှင့်ပေးအပ်သောဆုဖြစ်ပြီး အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ထိုဆုရရှိသူများမှာ (၁) ဆရာတော် ဦးဣန္ဒက (၂) ဦးခင်ဝင်း (၃) ကိုသန်းနိုင် တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
အခမ်းအနားကို ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရှိသော မြန်မာမျိုးချစ်ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု (BPDF) မှတာဝန်ယူ
Thirty-five years ago on June 26, 1976, on one cold, rainy day early in the morning Salai Ko Tin Maung Oo was secretly hanged by Burma's military dictatorship in the infamous Insein Prison. Even though it has been thirty-five years, it seems like it was only yesterday when that happened. That is why we have arranged to have the 35th Commemoration of Salai Ko Tin Maung Oo here in Vancouver, B.C., Canada on June 25, 2011. So, we cordially invite you to come and join us in remembering Salai Ko Tin Maung Oo at this 35th Commemoration event.
Ma Hla Myaing and Salai Ko Tin Maung Oo's entire family
Invitation to the 35th Commemoration of Salai Ko Tin Maung Oo-front.jpg
Invitation to the 35th Commemoration of Salai Ko Tin Maung Oo-back.pdf
4672K View Download
Location Map for Invitation to 35th Commemoration of Salai Ko Tin Maung Oo.pdf
ဆန္ဒပြမယ်ဆိုလို့ မြို့တော်ခန်းမ ရှေ့မှာ လူတွေ စောင်...
အညတရ သူရဲကောင်း ဂုဏ်ပြုပွဲသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အ...
Invitation to the 35th Commemoration of Salai Ko T...